Nidaamka Betic: astaamaha, asalka iyo noocyada dhagaxyada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 01/06/2021 10:20 | Geology
Maanta waxaan ka hadlaynaa Nidaamka Betic. Juquraafi ahaan, kooxdan buuraleyda ah waxay ka kala bilaabmaan Gacanka Cádiz illaa Bulshadda Valencian iyo xeebta koonfureed ee Jasiiradaha Balearic. Dhanka woqooyi, waxay xuduud la leeyihiin Guadalquivir Basin iyo cidhifka koonfureed ee masaajidada Iberia iyo Nidaamka Iberia, halka Badda Alboran ay ku taallo cirifka koonfureed. Si kastaba ha noqotee, sida Pyrenees, macno ahaan juquraafi ahaan, waxay ku fidsan tahay xadka juqraafi ahaan, waxay u fidsan tahay koonfurta iyo waqooyi-bari ee ka hooseysa Badda Alboran, qayb ka mid ah qaabdhismeedkiisana kama kala go'an xagga hoose ee badda Dhexe. ee Mallorca.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato nidaamka Betic, astaamahiisa iyo muhiimadiisa.
2 Qaab dhismeedka nidaamka Betic
3 Meelaha nidaamka Betic
3.1 Aagga bannaanka
3.2 Aagga gudaha
Baaxadda buurtu waa natiijada farsamaynta wax soo saar ee ka bilaabatay dhammaadka Cretaceous qiyaastii 100 milyan oo sano ka hor iyo waxay badanaa ku dhacdaa cidhifyada woqooyi iyo koonfurta ee saxanka Iberian. Qaab-dhismeedkiisa iyo isbeddelka ku xigga ayaa dhib badan maxaa yeelay waa natiijada is-dhexgalka ee laba taariko waaweyn iyo xannibaadda qaaradda, maanta makarafoonka 'Alboran', oo sameeya suunka hoose ee buuraha, ayaa u dhaqaaqay dhanka galbeed ugu dambayntiina wuxuu ku dhacay marinka Mesozoic iyo waqooyi-galbeed Afrika, oo sameysma buurta Betica-Rifeña.
Mid ka mid ah xaqiiqooyinka cajiibka ah ee heerka kortikalku waa in aan nooc xidid ah laga helin buurta hoosteeda, sida ay tahay nidaamyada kale ee alfine orogen. In kasta oo dhumucda qolofta qaarkood la arki karo, kama badna 40 kiilomitir kiisaska midkood. Xaqiiqda kale ee cajiibka ah ee heerka jiritaanku waa khafiifinta degdegga ah ee lagu arki karo aagga xeebta. halkaas oo dhumucda qolofku ay qiyaastii tahay 22 kiiloomitir. Aaggu sidoo kale, u sii socoshada gudaha wabiga Alboran ee uu durba gaadho uguyaraan, isagoo dhumucdiisu tahay 15 kiiloomitir.
Qaab dhismeedka nidaamka Betic
Marka la eego astaamahan xayndaabka xuduudaha iyo isticmaalka qaar ka mid ah shuruudaha cilmiga xoolaha iyo qaabdhismeedka, waxay horseeday in la kala saaro nidaamka Betic sida Rif-ka laba qaybood oo waaweyn iyo sidoo kale carruur kala duwanaan ah oo lagu kala soocay xiriir farsamo. Intaa waxaa sii dheer, labadan aag waxay leeyihiin asal kala duwan oo asal ahaan ka soo jeeda. Aan aragno waxa ay yihiin labadan aag ama cinwaanada:
Koonfurta Iberian Domain ama Aagagga Dibadda: Meelahan way ku kala duwan yihiin labada saf buurood waxaana kala sameeya dhagaxyada Mesozoic iyo Cenozoic kuwaas oo midba midka kale isku dhejinayo iskuna laalaabayo iyada oo aan lahayn nooc metamorphization ah oo u dhigma jiinka biyaha badda ee Tethys.
Alboran Domain ama Aagagga Gudaha: aagaggan ayaa ka kooban. Isugeynta gogosha gogosha leh oo leh agab asal ahaan metamorphic ah. Asalku wuxuu xiriir la leeyahay socdaalka microplate-ka Alboran ee ku yaal bariga fog.
Marka lagu daro aagaggan ballaaran, waxaan kala saari karnaa nidaamka Betic ka meelaha kale sida kuwan soo socda:
Furrow of Flyschs ee Campo de Gibraltar: majiro wax hay'ad ah oo loo aaneynayo tan iyo markii nooca qolofka ay ku taal uu yahay mid gebi ahaanba aan la aqoon, wuxuu ku badan yahay labada saf ee buuraha wuxuuna ku yaalaa labada dhinac ee marinka Gibraltar.
Niyad jabyada Tertiary Post-orogenic kadib: diiqadahaani waxay ka kooban yihiin neogene iyo quater quater. Inta badan daamankaan waxaa soo saaray nabaad-guurka waxyaabaha laga helo meelaha ku hareeraysan. Waxay ku kala duwan tahay inta badan wabiyada kala jaadka ah 3030 30 dhanka kala duwan ee buurta -Dhibashada Guadalquivir- iyo meelaha kale ee intramountain -Dression of Granada, Guadix-Baza, Almería-Sorbas, Vera-Cuevas de Almanzora iyo Murcia inta badan.
Neogene-Quaternary volcanism: Waxaa lagu matalayaa aagga Cabo de Gata iyo Murcia. Fulkaanahaan oo u dhigma muujinta fulkaanaha postogenic ee laxiriira tectonics-kii dhowaa sababo laxiriira saxan fara badan.
Meelaha nidaamka Betic
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno aagagga nidaamka Betic iyo astaamahooda. Waxaan ku bilaabaynaa aagga dibedda.
Waxay kala yihiin Mesozoic iyo Cenozoic dhagxaanta sedimentary, oo badankood asal ahaan badda ka soo jeeda, oo laga sameeyay webiga Tethys ee ku teedsan marinka qaaradda ee koonfurta Iberia, laguna xareeyo laalaabka alpine. Waxay fadhiyaan ballaadhin weyn oo buurta dhexdeeda ah waxayna u taagan yihiin muddada u dhexeysa Triassic 250 milyan oo sano ka hor Miocene.
Waxay soo bandhigayaan qaab lagu garto guud ahaan kala-goynta dhulka hoostiisa (Paleozoic varisco) iyo dhagaxa qalloocan (laalaabka, cilladaha iyo gogosha la riixay). Qeybta hoose ee 'Paleozoic' ma soo baxeyso oo waxay ku sii jirtaa qoto dheer 5-8 kiilomitir, oo ay sameeyeen dhagaxyo la mid ah Iberian Massif. Laga soo bilaabo meeshii asalka ahayd ee cutubka dib u dhiska, weel asal ah oo leh kordhin fidsan 2-3 jeer ka weyn tan hadda jirta.
Ciladaha da 'kala duwan ayaa la arkaa. Intii lagu jiray xilligii Jurassic, xasillooni darro qaab-dhismeed ayaa dhacday taas oo keentay in loo qaybiyo Tethys Basin gobollada kala-duwanaanta qaabdhismeedka. Riixitaanka wuxuu ka bilaabmay Cretaceous wuxuuna kusii socday Paleogene. Heerkii ugu dambeeyay iyo kii ugu weynaa ee cilladaha ayaa ka dhacday Miocene, taas oo horseeday kor u kac ballaaran oo buuraha ah.
Waxay ku taal cirifka koonfureed ee kala duwanaanta buuraha Betica, oo ka bilaabata Estepona (Malaga) ee galbeedka illaa Cape Santa Pola oo u dhexeysa Murcia iyo Alicante ee bariga.
Aagga paleogeographic ee gudaha ayaa asal ahaan ka soo jeeda bariga wuxuuna ka mid ahaa Alboran ama Mesomediterranean microplate. Markii la xiray wabiga qadiimiga ah ee Tethys, microplate-ka laga soocay waqooyi-bari Afrika wuxuu u haajiray dhinaca dambe sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa isbeddelka. Dhagaxyada Paleozoic waxay ka muuqdaan aagga gudaha ee mikroplate-ka, kaas oo markii hore laallaabay xilligii Varisca orogen, waana la xaalufiyey oo dib loo hawlgeliyey xilligii Alpine Orogeny.
Ma jiraan wax dhagxaanta Mesozoic ah oo ku yaal aagga gudaha, guud ahaanna u dhigma laamiyada la dhigo agagaarka mikroflaterada ama inta lagu jiro socdaalkooda iyo heerarka hoos u dhaca Triassic wuu ka duwan yahay nidaamka intiisa kale, maxaa yeelay saldhigeedu wuxuu ka samaysan yahay dhagxaanta clastic iyo inta kale ee dolomite. Dhagaxyada Jurassic iyo Cretaceous waa dhagxaanta kaarboonka. Guud ahaan, marka laga reebo xoogaa isku-dheelitirnaanta Eocene ee gogosha ah, qashinka Paleogene waa la la'yahay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto nidaamka Betic iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Nidaamka Betic